Jery taratra… herinandro: programa… asa avy hatrany | NewsMada
Jery taratra… herinandro: programa… asa avy hatrany
Nanazava ny amin’ny Politika ankapoben’ny fanjakana (PGE) teny anivon’ny Antenimiera roa tonta ny Praiminisitra Ntsay Christian. Nambarany fa fampiharana ny velirano 13 nifanaovan’ny filohan’ny Repoblika tamin’ny vahoaka ny PGE. Voaresaka ihany koa ny amin’ny fanovana toe-tsaina amin’ny ady amin’ny kolikoly, ny tandrevaka, ny fanodinkodinam-bolam-panjakana…
Lany tsy nisy nitsipaka teny anivon’ny Antenimiera roa tonta ny volavolan-dalàna manome fahefana ny filohan’ny Repoblika hamoaka lalàna amin’ny didy hitsivolana. Mandritra ny fotoana tsy iasan’ny Antenimierampirenena izany fa tapitra ny 5 febroary lasa teo ny fe-potoam-piasany. Lany koa ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny fifidianana ankapobeny sy ny fifidianana depiote.
Nilaza ny Ceni fa tsy nahomby ny fanavaozana ny lisi-pifidianana, taona 2018-19. Tsy mahafa-po ny salanisan’ny mpifidy vaovao misoratra anarana amin’ny lisi-pifidianana manerana ny Nosy amin’izao. Nefa hifarana vonjimaika ny 15 febroary ny lisi-pifidianana, ary hikatona tanteraka ny 15 mey. Anisan’ny fangatahany ny fanokafana mandavantaona ny lisi-pifidianana.
Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika ny amin’ny andraikitry ny vadin’ny filohan’ny Repoblika fa tsy mitsabaka amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana izy, tsy manao tsindry bokotra amina tomponandraiki-panjakana na fitantanan-draharaham-panjakana, tsy mandray karama na tambin-karama sy tsy manana kabinetra ary tsy misy sora-bola natokana ho azy…
Nisy ny hetsika fahatsiarovana ny faha-10 taon’ny 7 febroary 2009, teny Ambohitsorohitra, nisian’ny namoy ny ainy sy ny naratra tamin’izany. Nambaran’ny filoha Rajoelina Andry fa tsy ekena intsony ary hanafarana ny taranaka mba tsy hisy intsony Malagasy mandripaka ny Malagasy, na inona hevitra politika tsy mitovy. Tsy fahatsiarovana fotsiny no natao fa fanamafisana ny tolona.
Programa… asa avy hatrany? Nisy ny fidinana ifotony nataon’ny filoha Rajoelina tany amin’ny faritra Diana, niatrehana avy hatrany ny ady amin’ny fihanaky ny aretina kitrotro: fanomezam-baksiny maimaimpoana, fitsaboana…